Uqeqesho lwe-4-5-1 - iiCaccer Tactics
Midlalo Udlala kanjani
Ukujongwa kwe-4-5-1 kunye nendlela ephunyezwa ngayo
Olu lwakhiwo luye lwafunyanwa ngamaqela aseYurophu iminyaka.
Kuqhelekileyo kuqeshwe xa abaqeqeshi bafuna indlela yokuphepha emacaleni abo, kwaye ababukeleyo banokuqaphela rhoqo ukubunjwa kusetyenziswa kwiimidlalo zeMidlalo ye-Champions League .
Ukukhetha ukupakisha umda phakathi kwemizimba kuthetha ukuqina okukhuselekileyo.
Umdlali kwi-Form 4-5-1
Ngomdlali omnye kuphela phezulu, kukho umthwalo omkhulu kulo mdlali ukuba enze.
Kubalulekile ukuba ibambe ibhola kwaye ibenze abanye badlale. UDidier Drogba ngumzekelo obalaseleyo womdlali onamandla kunye nokwazisa ukunyamekela umthwalo womdlali omnye.
Ijubane liyinzuzo njengoko umqhubi uya kucelwa ukuba asebenze kwiibhola eziphakathi.
Amadoda afanelekileyo alawulwa kakuhle, ikhono lokuhamba kunye namandla angaphezulu omzimba njengoDrogba unokuphumelela kwesi sikhundla.
Ukudlala ngokubhekiselele kwintetho yokhuseleko kuphela kunokukukhupha kumdlali ngoko kubalulekile ukuba ulungele ngokupheleleyo xa efika ensimini.
Abaqhubi beMidiya kwi-Form 4-5-1
Kubalulekile ukuba ukuba iqela lihlasele injongo, abahamba phambili baya phambili ngokukhawuleza ukuxhasa umdlali.
Njengoko kunjalo kunye neenkomfa ezininzi, omnye umdlali okhuselayo uya kuhlala phantsi kwaye ekhumbule emine. Lo mdlali uhlawuliswa ngokulwa nokulwa nokuchaswa, kwaye xa iqela likwinqanaba elingemuva, lisebenza njengelungu elongezelelweyo lokukhusela.
Kodwa ezo zibini zijikeleze kuye zikhangele ukuhlaselwa kunye nokukhusela.
Umgca ophakathi kwamadoda amahlanu ohlaselayo unokuba nzima kubadlali abajongene nayo njengoko kunzima ukuthabatha abaqhubi abahamba phambili bebhokisi, okanye badlulisela ibhola phakathi kwabo ukwenza indawo.
Amaphiko kwi-Form 4-5-1
Ngoxa ubuncinci omnye wabaphakathi bezemidlalo baya kufundiswa ukuba baqhube phambili rhoqo, oku kunjalo nangamaphiko ekomiti.
Enyanisweni, ukuba iqela lijongene nokuhlaselwa, ukubunjwa kungakhangela ngakumbi njenge-4-3-3 , kunye neephiko ezimbini zidlala indima ephezulu njengoko zikhangele ukuxhasa umntu ongaphambili, kwaye zenze iinjongo zokubeka iinjongo ngokunqanda.
Umsebenzi we-winger orthodox ukuqhuba umgca kwaye ujonge ukuwela iminqamlezo ebhokisini, kodwa ukuba oku kusebenze, abadlali bemida kufuneka baqhubele phambili kwindawo yesigwebo.
I-winger kufuneka ihlale ikhumbule imithwalo yakhe yokuzikhusela, kunye namaqela amaninzi afaka i-back-backs backs.
Ukubuyiselwa ngokupheleleyo kwi-Form 4-5-1
Kukho ngaphezulu kunanini ngaphambili kwibhola lebhola lehlabathi ekuhlaseleni ngokupheleleyo, kwaye le nto isebenza ngokusemthethweni kwi-4-5-1. Ingakanani ehamba phambili iya kuxhomekeke ekuhlaseleni kweembono zeqela .
Inxaxheba ephambili ye-backback kukukhusela ngokumelene nephiko kunye nenkcaso ephilileyo, ngelixa unceda abakhuseli abaziintloko.
AbaKhuseli beNtloko kwiMfundo 4-5-1
Kungakhathaliseki ukuba kusetyenziswe ntoni, umsebenzi wabasemagunyeni abasemgangathweni usenakuchaphazeleka.
I-back-backs ihlawuliswa ngokufaka ibhola kude, ukukhawuleza nokukhusela. Nangona ngokukhululekileyo bekhululekile ukunyuka ukuya kwiindawo ezibekwe esithembeni sokuhamba emnqamlezweni okanye kwikona, indima yabo ephambili kukuba bayeke abadlali beentshaba kunye nabaphakathi.
Abalindi ababini basemgangathweni banokumakisha zonxweme (ukumakishwa kwe-zonal) okanye bathathe iimbopheleleko zokumakisha abantu ngokuxhomekeke kwimigaqo yomqeqeshi.
Indlela yokusebenzisa ii-Pips ezide-Iindlela ezisisiseko zokusebenzisa i-Long Pimpled Rubbers
Iindlela ezine ezikhuselekileyo zokuba ukhuluphele
20 Ugxininisa Izilwanyana ezinokusebenzisa uncedo oluncinane, nceda
Amandla Amandla okufunda kwiGititar
I-Sweetgum - 100 Iintlobo ezininzi eziqhelekileyo eziMntla eMelika